Bhuku Rekutanga reMadzimambo 11:1-43
Madzimai aSoromoni anotsausa mwoyo wake (1-13)
Vanhu vaipikisa Soromoni (14-25)
Jerobhoamu anovimbiswa madzinza gumi (26-40)
Soromoni anofa; Rehobhoamu anoitwa mambo (41-43)
11 Asi Mambo Soromoni aida madzimai mazhinji ekune dzimwe nyika,+ tisingabatanidzi mwanasikana waFarao:+ aida vakadzi vechiMoabhi,+ vechiAmoni,+ vechiEdhomu, vechiSidhoni+ nevechiHiti.+ 2 Vaiva vemarudzi akanga anzi nezvawo naJehovha kuvaIsraeri: “Regai kupinda pakati pawo,* uye iwo ngaarege kupinda pakati penyu, nekuti chokwadi achaita kuti mwoyo yenyu itevere vanamwari vawo.”+ Asi Soromoni haana kuda kusiyana navo uye aivada. 3 Aiva nemadzimai 700 aiva nezvinzvimbo zvepamusoro, nevarongo 300, uye madzimai ake akatsausa mwoyo wake zvishoma nezvishoma. 4 Soromoni paakanga akwegura,+ madzimai ake akatsausa mwoyo wake ukatevera vamwe vanamwari,+ uye mwoyo wake wakanga usina kuperera* kuna Jehovha Mwari wake semwoyo wababa vake Dhavhidhi. 5 Uye Soromoni akatevera Ashtoreti+ mwarikadzi wevaSidhoni naMirikomu+ mwari anosemesa wevaAmoni. 6 Soromoni akaita zvakaipa pamberi paJehovha, uye haana kutevera Jehovha zvizere sezvakanga zvaitwa nababa vake Dhavhidhi.+ 7 Panguva iyoyo Soromoni akavakira Kemoshi mwari anosemesa wevaMoabhi nzvimbo yakakwirira+ pagomo rakatarisana neJerusarema, uye akavakirawo Moreki,+ mwari anosemesa wevaAmoni.+ 8 Ndizvo zvaakaitira madzimai ake ese ekune dzimwe nyika aikwidzira vanamwari vawo utsi hwezvibayiro, achibayira kwavari. 9 Jehovha akatsamwira Soromoni kwazvo, nekuti mwoyo wake wakanga watsauka pana Jehovha Mwari waIsraeri,+ uyo akanga azviratidza kwaari kaviri+ 10 uye akanga amuyambira nezvenyaya iyi, kuti asatevera vamwe vanamwari.+ Asi haana kuteerera zvakanga zvarayirwa naJehovha. 11 Jehovha akabva ati kuna Soromoni: “Nemhaka yekuti waita izvi, uye hauna kuchengeta sungano yangu nemirau yangu sezvandakakurayira, chokwadi ndichabvarura umambo ndichihubvisa kwauri, uye ndichahupa mumwe wevaranda vako.+ 12 Zvisinei, ndichifunga nezvababa vako Dhavhidhi, handizozviiti uchiri mupenyu. Ndichahubvarura ndichihubvisa muruoko rwemwanakomana wako,+ 13 asi handizobvaruri umambo hwacho hwese+ ndichihubvisa kwaari. Ndichapa mwanakomana wako dzinza rimwe chete,+ ndichifunga muranda wangu Dhavhidhi uyewo Jerusarema randakasarudza.”+ 14 Jehovha akabva aita kuti pave nemunhu aipikisa Soromoni,+ Hadhadhi muEdhomu weimba yeumambo yeEdhomu.+ 15 Dhavhidhi paakakunda Edhomu,+ Joabhi mukuru weuto akaenda kunoviga vaya vakanga vaurayiwa, uye akaedza kuuraya vanhurume vese vaiva muEdhomu. 16 (Nekuti Joabhi nevaIsraeri vese vakagara imomo kwemwedzi 6 kusvikira aparadza vanhurume vese muEdhomu.) 17 Asi Hadhadhi akatiza nevamwe vaEdhomu, vaiva vashandi vababa vake, vachibva vaenda kuIjipiti; panguva iyoyo Hadhadhi akanga achiri mukomana wechidiki. 18 Saka vakasimuka vachibva muMidhiyani, vakasvika kuParani. Vakatora varume kuParani+ vakaenda kuIjipiti kuna Farao mambo weIjipiti, uyo akabva amupa imba, akaita kuti agare achipiwa zvekudya, uye akamupawo nzvimbo yekugara. 19 Hadhadhi akanzwirwa nyasha naFarao, zvekuti akamupa muramu wake, munin’ina wamambokadzi* Tapenesi, kuti ave mudzimai wake. 20 Nekufamba kwenguva, munin’ina waTapenesi akamuberekera mwanakomana ainzi Genubhati, uye Tapenesi akamurerera* muimba yaFarao, uye Genubhati akaramba ari muimba yaFarao pakati pevanakomana vaFarao. 21 Hadhadhi akanzwa ari muIjipiti kuti Dhavhidhi akanga aradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake+ uye kuti Joabhi mukuru weuto akanga afa.+ Saka Hadhadhi akati kuna Farao: “Ndibvumirei kuenda kunyika yangu.” 22 Asi Farao akati kwaari: “Washayei kuno kwandiri zvawava kuda kuenda kunyika yako?” Iye akati: “Hapana, asi ndapota ndiregei ndiende.” 23 Mwari akaitawo kuti pave nemumwezve munhu aipikisa Soromoni,+ Rezoni mwanakomana waEriyadha, uyo akanga atiza ishe wake Hadhadhezeri+ mambo weZobha. 24 Akaunganidza varume, akava mukuru weboka revapambi, Dhavhidhi paakakunda* vanhu vekuZobha.+ Saka vakaenda kuDhamasiko+ vakagara ikoko, vakatanga kutonga muDhamasiko. 25 Akapikisa vaIsraeri mazuva ese aSoromoni, kuwedzera pakupikiswa kwavakaitwa naHadhadhi, uye aivenga vaIsraeri chaizvo panguva yaaitonga Siriya. 26 Uye kwaiva naJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, muEfremu wekuZeredha, mushandi waSoromoni,+ aiva naamai vainzi Zerua, avo vaiva chirikadzi. Naiyewo akatanga kupandukira mambo.+ 27 Izvi ndizvo zvakaita kuti apandukire mambo: Soromoni akanga agadzira Murwi Wevhu,*+ uye akanga avhara pakanga pakavhurika paguta rababa vake Dhavhidhi.+ 28 Jerobhoamu aiva murume aigona basa. Soromoni paakaona kuti jaya racho raishanda nesimba, akarigadza kuva mutariri+ webasa rese rekumanikidzwa reimba yaJosefa. 29 Panguva iyoyo Jerobhoamu akabuda muJerusarema, uye muprofita Ahija+ wekuShiro akamuwana ari mumugwagwa. Ahija akanga akapfeka nguo itsva, uye vaviri vacho vaiva vega musango. 30 Ahija akabata nguo yacho itsva yaakanga akapfeka akaibvarura kuita zvidimbu 12. 31 Akabva ati kuna Jerobhoamu: “Tora zvidimbu gumi, nekuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Ndiri kubvarura umambo kuti hubve muruoko rwaSoromoni, uye ndichakupa madzinza gumi.+ 32 Asi dzinza rimwe chete richaramba riri rake+ nekuda kwemuranda wangu Dhavhidhi+ uye nekuda kweJerusarema, guta randakasarudza pamadzinza ese aIsraeri.+ 33 Ndichaita izvi nekuti vakandisiya+ uye vari kukotamira Ashtoreti mwarikadzi wevaSidhoni, Kemoshi mwari weMoabhi, naMirikomu mwari wevaAmoni, uye havana kufamba munzira dzangu vachiita zvakarurama pamberi pangu nekuchengeta mirau yangu nemitongo yangu sezvakaitwa nababa vake Dhavhidhi. 34 Asi handizobvisi umambo hwacho hwese muruoko rwake, uye ndichaita kuti arambe ari jinda mazuva ese eupenyu hwake, ndichiitira muranda wangu Dhavhidhi wandakasarudza,+ nekuti akachengeta mirayiro yangu nemirau yangu. 35 Asi ndichabvisa umambo muruoko rwemwanakomana wake ndohupa kwauri, kureva madzinza gumi.+ 36 Ndichapa mwanakomana wake dzinza rimwe chete, kuti muranda wangu Dhavhidhi agare aine rambi pamberi pangu nguva dzese muJerusarema,+ guta randakasarudza kuti rive nzvimbo yekuisa zita rangu. 37 Ndichakusarudza, uye uchatonga zvese zvaunoda,* uye uchava mambo weIsraeri. 38 Kana ukateerera zvese zvandinokurayira wofamba munzira dzangu, woita zvakarurama pamberi pangu uchiteerera mirau yangu nemirayiro yangu, sezvakaitwa nemuranda wangu Dhavhidhi,+ ndichavawo newe. Ndichakuvakira imba inogara kwenguva yakareba, sekuvakira kwandakaita Dhavhidhi,+ uye ndichakupa Israeri. 39 Ndichanyadzisa vana vaDhavhidhi nemhaka yeizvi,+ asi kwete nguva dzese.’”+ 40 Saka Soromoni akaedza kuuraya Jerobhoamu, asi Jerobhoamu akatizira kuIjipiti, kuna Shishaki+ mambo weIjipiti,+ uye akaramba ari muIjipiti kusvikira Soromoni afa. 41 Kana iri nhoroondo yese yaSoromoni, zvese zvaakaita uye uchenjeri hwake, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo yaSoromoni?+ 42 Soromoni akaita makore 40 achitonga Israeri yese ari muJerusarema. 43 Soromoni akabva aradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake, akavigwa muguta rababa vake Dhavhidhi; uye mwanakomana wake Rehobhoamu+ akava mambo panzvimbo pake.
^ Kana kuti “Regai kuroorerana nawo.”
^ Apa hapasi kureva kuti mambokadzi uyu aitonga.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “akamurumura.”
^ ChiHeb., “paakauraya.”